Xulka Nugaal oo u gudubtay finaalaha ciyaaraha gobollada Puntland 2012; Sanaag oo laga badiyey. – Radio Daljir
Xulka Nugaal oo u gudubtay finaalaha ciyaaraha gobollada Puntland 2012; Sanaag oo laga badiyey.
Garowe, Feb 09 – Xulka Gobolka Nugaal ayaa galabta ciyaar uu ku silcay wuxuu ugu soo gudbay wareega kama danbaysta ee finalka koobka kubada cagta gobolada puntland.
Ciyaar xiiso badnayd oo ku aadaynd samifinalka ciyaaraha Puntland ayaa galabta waxaa isku arkay gobolada nugaal iyo sanaag ciyaartaasi ayaa daqiiqadihii ugu horeeyay xulka sanaag waxaa u suurta gashay inay la hormaraan goolkii ugu horeeyay taasoo ciyaarta ka dhigtay mid u badan weerar waxaana dhawr fursadood xulka nugaal ka qasaariyay weeririyahanada yacquub, muuse iyo baroon oo soo bandhigay ciyaar ay ku dheehan tahay weerar culus iyo darbado kulul.
Qaybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 1 – 0 waxaana markaasi la galay waqtigii nasashada iyadoo Sanaag ay ku hogaaminaysay 1 – 0 uu goolka saxiixay xidiga Saki Cali Malgaash, koox walbana waxay dib ugu laabatay wada tashiyo ay la samaynayaan macalinka kooxda.
Markii la isku soo laabtay ayaa halkii waxaa ka sii socday weerarka ay ka qayb qaadanayeen yacquub,muuse iyo baroon waxaana daqiiqado ka dib garoonka laga saaray xidiga nugaal ee baroon ka dib markuu dhwaac soo gaaray, sidoo kale waxaa badal lagu sameeyay muuse oo qayb ka ahaa weerarka laba aflahaa ee nugaal ay ku duulaysay, weerarka nugaal ayaa halkii ka sii socday waxaana sidoo kale xulka sanaag ay isku dayayeen inay dhaliyaan goolkii labaad iyagoo adeegsanaya farsamada loo yaqaan kontoro taaga, taasoo keentay inay dhawr jees sigtaan xulka nugaal.
Ciyaarto oo ay ka harsan yihiin wax yar ayaa xulka nugaal waxaa u suurta gashay inay la yimaadaan goolkii barbar dhacda kaasoo uu keenay xidig badal ku soo galay ciyaarta, garoonka ayaa markasi waxaa is badalay sawaxanka iyo mashxarada ka imaanaysay taageerayaasha xulka nugaal oo garoonka aad u soo buuxiyay, isla daqiiqado ka dib garsoorihii ciyaarta geese weyne ayaa ku dhawaaqay inay ciyaarta dhamaatay laguna kala baxo lug ku laad ama rigoore.
Sidii caadada ahaydba fagaaraha ayaa la isla tagay iyadoo koox walba ay soo istaajisay 5 ciyaartooy uu ku xeel dheer rigoorada si ay u laataan.
Xulka Sanaag oo uu ka muuqday niyad jab xoogan iyo daal ayaa markaasi waxay qasaariyeen qaar ka mida rigoorooyinkii loogu tala galay inay dhaliyaan ciyaariyhanadu.
Ka dib markii rigooradii ugu dabaysay uu qasaariyaya mid ka mida xidigaha sanaag ayaa garoonka oo dhan waxaa is qabsaday sawaxan xoogan, waxaana gobolka martida loo yahay ee nugaal ay xaqiiqsadeen inay u soo baxaan kulanka maalinta axadaa lagu soo afmeerayo ciyaraha gobolada Puntland.
Sanaag sidaasi ayay kaga hartay ciyaaraha, maalinta berri ah ayaa la filayaa kulan kale oo xiiso badan kaasoo ay isku balan san yihiin gobolada Mudug iyo Karkaar oo ku kala bixi doona fagaaraha Mire Awaare; gobol walbana hada waxaa uu wadaa istiraatiijiyad ciyaareed oo uu kaga gudbo buundada is-reebreebka ee ciyaaraha; la arki doona xulka u soo baxa finaalaha ee la ciyaari doona xulka Nugaal maalinta Axadda.
C/risaaq Cali Cabdi ‘Silver’,
Radio Daljir, garoowe.